उपत्यकाका कोर क्षेत्रमा ठूला तथा साना मालबाहक सवारीमाथी प्रतिबन्द्ध, हट्ला त काठमाडौंको जाम र अस्तव्यस्तता ? – Mission Khabar
उपत्यकाका कोर क्षेत्रमा ठूला तथा साना मालबाहक सवारीमाथी प्रतिबन्द्ध, हट्ला त काठमाडौंको जाम र अस्तव्यस्तता ?
मिसन खबर १९ जेष्ठ २०७६, आईतवार १६:५३
काठमाडौं । असार १ गतेबाट काठमाडौंमा विहानदेखि बेलुकासम्म ठूला तथा साना मालबाहक सवारीले प्रवेश तथा सञ्चालन नपाउने भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म रिंगरोडसहित विभिन्न नाकामा मालवाहक सवारीलाई निषेध गरिने जानकारी दिएको हो ।
आपत्कालीन र अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग हुने बाहेकका सवारीलाई तोकिएको क्षेत्रमा बिहानदेखि साँझसम्म प्रवेश र सञ्चालन नगर्न सुचित गरिएको छ । दूध, तरकारी, फलफूल, पानी, कुखुराका चल्ला पानी, पेट्रोलियम पदार्थ, लगायतका सामग्री बोकेका सवारी सञ्चालनमा भने यो निषेधाज्ञ लागू हुनेछैन । काठमाडौंको मुख्य नाका, रिङरोड र भित्रि सडकमा समेत जामको समस्या तीव्र भएपछि मालबाहक सवारी रोक्न बाध्य भएको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । काठमाडौं र ललितपुरको चक्रपथभित्रको सबै क्षेत्र र भक्तपुरको भित्री शहरी क्षेत्रमा यो प्रावधान लागू हुनेछ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै चक्रपथ बाहिरको चाबहिल–जोरपाटी सडक, गोपीकृष्ण–कपन सडक, नारायणगोपाल चोक–बुढानीलकण्ठ सडक, बालाजु बाइपास–गोलढुंगा सडक, बगडोल–नख्खु सडक, सातदोबाटो–हरिसिद्धी सडक, ग्वार्को–चापागाउँ सडकमा विहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म मालबाहक सवारी सञ्चालन गर्न रोकिने छन् । शहरभित्र अत्यावश्यक बाहेकका कुनै पनि मालबाहक सवारी अब ट्राफिकले रोक्नेछ । सानादेखि ठूला सबै मालबाहकलाई चलाउन नदिइने विभागको दाबी छ । राती मालबाहक सवारी चल्दा काठमाडौंमा रात्री जीवन चलायमान हुने र बजार पनि रातीसम्म खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
असारदेखि नागढुंगाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारी दिउँसो धादिङकै सडक खण्डमा रोकिनुपर्ने छ । टोखाको बाटो भएर आउने सवारी पनि माथिल्लो भागमै, ककनीको रुट हुँदै आउने मालबाहक सवारी गोलढुंगा अघि नै रोकिनुपर्ने छ । रात परेपछि भने काठमाडौंभित्र प्रवेश गर्न पाउने छन् । यसअघि रिंगरोडभित्र ठूला मालबाहक सवारीको प्रवेश र सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो ।
क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, यातायात / यात्रा, विकास / पुर्वाधार, समाचार